Waxaan soo helay xayawaan baadi ah - King County
Iibsashada ama cusboonaysiiyo shatiga xayawaanka Barnaamijka korinta xayawaanka Waxaa iga dhumay xayawaankayga Waxaan soo helay xayawaan baadi ah
Iska soo wareejinta xayawaanka Jawaab celinta xakamaynta xayawaanka
Ma waxaad soo heshay xayawaanka baadi ah oo ma hubtid waxaad sameeyn lahayd? Halkaan waxaa kujira xoogaa tallaabooyin ah oo fudud oo aad qaadi karto si aad uga caawiso in xayawaanka dib loogu celiyo qofkii lahaa...
Maskaxda ku Hay Haddii aad ku guulaysato helista milkiilaha xayawaanka baadida ah, fadlan naga soo wac 206-296-7387 ama email noogu soo dir lostpets@kingcounty.gov si aan u xirno kiiska warbixinta helitaanka iyo/ama lumitaanka.
Tilmaamaha tallaabooyinka la qaado marka aad wax ka qabanayso xayawaan baadi ah
Haddii aad si ammaan ah u sameyn karto, hubi si aad u arko haddii xayawaanka uu leeyahay shati ama taaga aqoonsiga. Milkiilayaasha waxay inta badan si toos ah ugu qoraan lambarka telefoonka taaga ama xarigga qoorta. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad dib ugu celiso xayawaanka lunsan milkiilahiisa adigoon annaga noo yeedhin.
Haddii xayawaanku xiran yahay taaga shatiga Adeegyada Xayawaan Goboleedka ee King County (RASKC), wac lambarka ku qoran taaga (206-296-2712) oo diyaari lambarka lixda xaraf ah oo ku qoran shatiga si aad ugu sheegto. Marka aad wacdo, waxaa ku jawaabi doona shaqaalaha shatiga xayawaanka ama nidaamkeena fariin qabashada codka ah ee iswada. Sii lambarka shatiga shaqaalaheenna, ama geli lambarkaas markii uu ku jawaabo nidaamka iswada. Waxaa lagu siin doonaa lambarka telefoonka milkiilaha xayawaanka si aad isaga toos ula xiriirto oo aad dib ugu celiso xayawaanka.
Hubi inaad ka fiiriso database-ka Xayawaanka Lumay si loo xaqiijiyo haddii xayawaanka aad soo heshay la soo wariyay inuu waayay Milkiilahiisii..
Haddii xayawaanka uusan ahayn mid dagaallamaya oo aad jeclaan lahayd inaad gurigaaga ku sii hayso inta aad isku dayayso helitaanka qofkii lahaa, fadlan buuxi Warbixinta Xayawaanka ee Online. Haddii aadan awoodin in aad buuxiso Warbixinta Xayawaanka ee online-ka, naga soo wac 206-296-3936, waxaana kaa caawin doona inaad buuxiso warbixintaas. Ogeysiin: Dhammaan xayawaanka waa in laga eega microchip iyo sawir waa in bixiya si uu u caawiyo sidii guriga loogu celin lahaa. Haddii aadan awoodin inaad soo geliso sawir marka aad soo gudbinayso warbixinta xayawaanka ee online-ka, fadlan keen xayawaanka Xarunta Korinta Xayawaanka ee Kent. Waxaan qaadi doonaa sawir oo ka eegi doona xayawaanka microchip..
Haddii aadan awoodin inaad ku hayso xayawaanka gurigaaga, waxaad geysa Xarunta Korinta Xayawaanka ee Kent ama hoyga xayawaanka ee deegaankaaga. Bacdamaa aannu nahay bixiyaha xakamaynta xayawaanka ee inta badan King County, milkiilayaasha waxay marka hore eegi doonaan xarunteena. Waxaan hayn doonaa xayawaanka muddada baadida noocaasa lahayo. Haddii aan la soo doonana, dabeecadda iyo caafimaadka xayawaanka ayaa waxaa loo qiimeyn doonaa sidii loogu dari lahaa barnaamijkeena korsashada.
Ammaankaaga daraaddi, ha isku dayin inaad u dhowaato xayawaan dagaallamaya iyo/ama cabsanaya. Haddii aad si ammaan ah ugu hayn karto xayawaanka lumay deyrkaaga, garaashka, ama guriga eeyaha, fadlan naga soo wac (206) 296-7387 oo waan ka qaadi doonaa xayawaanka (saacadaha shaqada: 7 cisho ee todobaadkii / 7:30 am ilaa 6:30 pm).
Raadinta Xayawaanka Lumay
Riix badhanka hoose si aad uga raadiso database-ka xayawaanka la wariyay in la waayay.
Gudbi Warbixnta Helitaanka Xayawaanka
Haddii xayawaanku uusan ahayn mid dagaallamay oo aad jeclaan lahayd inaad ku sii hayso gurigaaga, hubi in aad riixdo badhanka hoose oo aad na siiso macluumaad faahfaahsan oo dheeraada. Waxaanu sameyn doonaa dadaal kasta si aanunu adiga iyo milkiilayaasha ugu soo sheegno marka aannu helno xayawaan leh astaamaha kuwaas u eg.